Wasiirka arrimaha gudaha oo kormeer ku tagay xarunta waaxda socdaalka dalka | Star FM
Home Wararka Kenya Wasiirka arrimaha gudaha oo kormeer ku tagay xarunta waaxda socdaalka dalka
Wasiirka arrimaha gudaha oo kormeer ku tagay xarunta waaxda socdaalka dalka
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo isku duwidda howlaha dowladda dhexe Dr.Fred Matiang’i ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta qaabilsan adeegyada socdaalka ee magaalada Nairobi.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitter-ka ayuu ku sheegay inuu dabagal ku sameynayay geeddisocodka dardargelinta arrimaha jinsiyadda.
Matiang’i ayaa sheegay inuu horay u jiray qorsho ah in bixinta aqoonsiga wadanka iyo dokumeentiyada kale ee muhiimka ah aynan qaadan wax ka badan 60 cisho.
Waxaa uu xusay in dadka barnaamijkan ka faa’iidaysanaya ay ka mid yihiin kuwo iyaga oo haysto jinsiyadda dalka iyo wadan kale isbeddel lagu sameeyay xeerarka bixinta aqoonsiga taasoo saameyn ku yeelatay.
Previous articleShirka golaha wadatashiga oo furmay xilli la raali geliyey Guudlaawe
Next articleRaila Odinga oo ku sugan Itoobiya